किन पत्रिकामा राखेर खानु हुँदैन? - Pahilo Online
किन पत्रिकामा राखेर खानु हुँदैन?
मोरङ । पत्रिका, किताब तथा कापीको पानामा सडक छेउमा पाउने विभिन्न खानेकुराहरूका साथ साथै घरमा समेत राखेर खाने गरिन्छ । हामीले राख्ने भाडा नभेटेको खण्डमा पत्रिकामा वा कागजको टुक्रामा खानेकुरासमेत बेर्ने गर्छौं साथै तेलबाट तारेका खानेकुराहरूलाई समेत तिनीहरूको तेल सोछ्नका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । यस्तो कागजमा बेरेर वा लिएर खाने बानीले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर र्पुयाउने गर्छ ।
पत्रिका तथा कापीहरू छाप्ने बेलामा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारको मसीले धेरै प्रकारको खतरनाक बायोएक्टिभ तत्वहरूका साथै ब्याक्टेरियाहरू पत्रिकामा माध्यमबाट खानेकुरामा टाँसिन जाँदा स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ । मसीमा हानिकारक रंग र रसायनमा हुने माइक्रो अर्गा्निजमले शरीरको हार्मोनलाई प्रभावित गर्ने हुँदा हर्मोनको सन्तुलनमा गडबडी निम्तिन जाँदा शरीरमा थुप्रै रोगले आक्रमण गर्छ ।
यसरी पत्रपत्रिकामा राखेर खाने गर्दा शरीरमा घातक रोग उत्पन्न गर्ने खालको कारक तत्त्वहरू पनि प्रवेश गर्छ । पत्रपत्रिकामा राखेर खाने गर्दा क्यान्सरसमेत हुने सम्भावना बढ्छ । यसले उच्च रक्तचाप, मृगौलाको रोग, फोक्सो र मूत्राशयको क्यान्सर हुने जोखिम बढ्छ । रिसाइकल गर्न मिल्ने कागज तथा कार्डबक्समा फ्थालेट नामक विषालु रसायनले पाचन प्रणालीलाई बिगारेर पेटसम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छ । रोगसँग लड्ने क्षमतालाई कम गर्ने हुँदा बानीले बच्चा र बूढाहरूलाई विभिन्न रोगहरू निम्त्याउने गर्छ । खानेकुरालाई पत्रिकामा राख्ने चलनसमेत हटाउनु पर्छ ।
सोमबार, २१ पुष २०७६, १६:१७ January 6, 2020 मा प्रकाशित
विराटचोकमा ग्यालेक्सि डेण्टल क्लिनिक उद्घाटन